SIFOOYINKA QAJAARKA SII KORDHAYA: SIDA LOO XOQMO QAJAARKA EE LAGU KORIYO IYO BERRIN BANNAAN - BEER CAGAARAN
Qallajinta qajaarka sida loo saxo
Beeraley kastaa waxa ay maqashay nidaamka qaadista qajaarka iyo faa'iidooyinkeeda. Aynu ka hadalnosida loo xoqmo qajaarka beerta furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo, iyo sababta ay qajaarka u baahan tahay nidaam noocaas ah.
Sida loo xoqdo cayayaan qajaarka
Cayayaanka la yiraahdo qajaarka, kuwaas oo ku kori doona miro kaliya ee kiisaska pollination by cayayaanka ama aadanaha. In noocan oo qajaar ah, inta badan on asliga ah ugu weyn, inflorescences labka ah ugu predominate. Miraha waa la sameeyay, sida caadiga ah, on lateral afkoda.
Noocyada cayayaanka bilawga soonka ee bilowga ah. Sidaa darteed, si ay u kiciyaan koritaanka ee lateral afkoda, qanjaruufo ayaa lagu talinayaa. Adiga oo jiidaya asliga ah ee ugu muhiimsan waqtiga, waxaad u ogalaan doontaa sprouts lateral inay koraan, koraan oo sameeyaan ubaxyo bacrin ah.
Waa muhiim!Dhirarka, kaas oo ka soo baxa sambabada hooseeya, waxay dhammaan nafaqooyinka u soo jiidi doonaan nafsadooda, waxayna taasi keeneysaa koritaanka caadiga ah ee miraha weyn.
Ku dheji noocyada noocan oo kale ah ayaa bilaabmaya ka dib muuqaalka on stem 5-6 caleemo. Laga soo bilaabo sinjiyada hooseeya waxay u baahan tahay in laga saaro inflorescences, antennae iyo laamo.
In inflorescences, ee sinaha hooseeya, miraha waxay horumariyaan aad u adag, inta badan u dhintaan, ama ay leeyihiin qaab aan joogto ahayn.
Waa muhiim! Marka la jiido, caleemaha waa in la tagaa, maadaama ay kaalin weyn ka ciyaaraan nafaqada dhirta.
Ubaxii ugu horeeyay ee muuqda qajaarka waa ragga. Dadka waxaa loogu yeeraa "ubaxyo madhan", maadaama aysan ku jirin miro. Dumarka, ubaxyada fruiting ee noocyo badan oo cayayaanka-cudurka qaba koraan ka soo lateral afkoda.
Sidaa darteed, bannaanka qajaarka qanjaafi, ka saara caleemaha cayayaanka.
Ma taqaanaa? Haddii caleemaha qajaarka laga saaro caleemaha labka ah, ka dibna inta badan cagaar ayaa qadhaadh noqon doonta.
Xoqdo asliga ah ee ugu weyn, ka dhigaya dhinacyada sida midho leh. Dhanka kale afkoda ayaa loo baahan yahay in lagu xiro iyada oo si khaas ah loo diyaariyey si ay u sameeyaan baadiyaha qajaar.
Ma taqaanaa? Beerta qaar ka mid ah ma ka saarto inflorescences ee sinaha hoose ee geedka, sida ay u maleynayaan in ay waayi doonaan goosashada.
Sida loo xoqmo qajaarka ee lagu koriyo
Qajaarinta qajaarka ee aqalka dhirta lagu koriyo ayaa ah mid adag oo nidaamsan. Laakiin habka saxda ah, tani maaha dhibaato. Nidaamka indha la'aanta qajaarka ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaa lagu magacaabi karaa nidaam afar gees ah.
Marxaladda koowaad, ka dib markii tufaaxii ugu horeeyay ee u muuqday baadiyaha, waa lagama maarmaan in la qaboojiyo marka hore iyo si taxadar leh u waraabiyo sprouts.
Qajaarka qallooca marxaladda labaad wuxuu bilaabmaa ka dib 5-8 foomka caleemo ka baxaya, waxaannu isku xoqaynaa laba caleemood oo ka soo baxa caleemaha waaweyn.
Marxaladda saddexaad sugitaanka dhismaha toban caleemo oo jiido caleemaha dhinaca iyo qaar ka mid ah ugxan-yari.
Marka caleenka kow iyo tobnaad la sameeyo, dhirta ayaa horayba u gaartay dhererka loo baahan yahay si loo xakameeyo gidaarka. Waa marxaladda ugu dambeysa qanjaruufo sare ee qajaar, ka dib markii nidaamkan, qajaar u baahan tahay bacriminta.
Ma taqaanaa? Haddii aad ka tagto qajaarka aqalka dhirta lagu koriyo adigoon cidhiidhi ahayn, ka dibna way koraan sidaas darteed qayb ka mid ah dalaggu u dhiman doonaa sababtoo ah la'aanta qoraxda.
Hababka iyo xeerarka loogu talagalay sameynta duurka qajaar
Abuurista baadiyaha qajaarka ah waa wax aad u baahi badan marka loo eego xajmiga.. Nidaamkani wuxuu lagama maarmaan u tahay dhirta si ay u hesho qorraxda iyo nafaqooyinka ku filan si ay u sameeyaan miraha macaan. Dhismaha qajaarka qajaarka waxaa lagu sameeyaa adoo xajinaya cawska khaaska ah ee qajaar, taasoo keentay geed wanaagsan oo qaabaysan.
Qajaarku wuxuu leeyahay nidaam xidideysan, taas oo aan awood u laheyn inuu si buuxda u siiyo biyo iyo nafaqo dhammaan miraha iyo ugxan-yaryar, taas oo ka dhalatay taas oo keenta huruud iyo hurdo. Qoryaha qajaarka ee qotoda leh ma laha dhibaatooyin noocaas ah, iyo waxaad ka heli kartaa miro aad u badan oo ka badan baadiyaha xorta ah ee sii kordhaya.
Wardheerta waa in ay hubaal tahay waqti si aad uga saarto xad-dhaaf ah afkoda maadaama ay dib u dhac ku dhici karto miraha qajaarka.
Sidee loo abuuraa baadiyaha hal asliga ah
Haddii aad qajaarka ku koraan aqalka dhirta lagu koriyo, markaa waa inaadan sugin illaa uu dhirta fidiyo. Waxaad u baahan tahay inaad xirto wax badan ka hor, ilaa toddobaadkii labaad ka dib markii aad ku beeray geedo. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad ilaaliso caleemaha kowaad iyo ugxan-yari.
Marka hore, waxay kuu muuqan doontaa in geeddi-socodka samaynta duur joogta ah ay aad u adag tahay oo waqti qaadashada, laakiin xaqiiqda, haddii aad si nidaamsan u sameyso oo aad u maamusho si aad ula socoto caleemaha cusub, wax dhibaato ah kuma lahaan doontid.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan 1-2 jeer usbuucii si loo sameeyo baaritaan loogu talagalay joogitaanka jeermiska cusub iyo laamaha.
Xeerarka abuuritaanka baadiyaha
11 maalmood ka dib markii laga beerto geedo dhulka ku yaala waxaad u baahan tahay inaad ku xirto xargaha, iyaga oo jiidaya dhererka loo baahan yahay.
Ku dhow agagaarka sinaha, ku dhow dhulka, inta u dhexeysa 4-5 caleemaha ugu horreeya, ka saar dhammaan ubaxyada iyo sprouts.
Marka dhirta ay korodhay 4-5 waraaqood, ka saar caleemaha dhinaca.
Sida dhirta koritaanka, ka saar caleemaha dhinaca.
Waxaan dhameeynaa dhismaha baadiyaha marka jirriddu ka soo baxdo dhererka loo baahan yahay garafka - waxaan qallajin karnaa kan sare.
Waa muhiim! Ma oggolaan karno koritaanka muddada-dheer ee caleemaha lateral.
Kala soocid dhowr ah afkoda
Iyada oo habka this formation, geed geed qajaar ah waxaa la heli karaa leh ee ugu weyn iyo dhowr lateral afkoda.
Xiddiga ugu weyn wuxuu ku xiran yahay xadhig iyo farsamooyin dhererka loo baahan yahay.
Ka tag caleemaha dhinaca kali ah ka hor inta aan la samaynin ugxan-yada koowaad.
Ka dib muuqaalka ugxan-yari ee ugu horreeya, caleemaha dhinaca si tartiib ah ayuu u jajabiyaa caleemaha waaweyn.
Caleemaha dambe waxay ku xiri karaan antennae ka dambeeya asliga ugu weyn.
Sida qaansorka afkoda ayaa kora, ku xir iyaga antennae midka ugu muhiimsan.
Sidaas oo kale ah baadiyaha Ha illoobin waqti ka waqti si aad u nadiifiso cawska dheeriga ah.
Talooyin iyo Talooyin ku Saabsan Qalinjabinta iyo Caleenta Qajaar
Beeraley kastaa wuu ogyahay sida loo xoqdo qajaarka, laakiin waxaa jira sidoo kale khiyaamo qaarkood waxay kaa caawinayaan inaad fududeeyso geedi socodkan oo aad tirtirto xaaladaha degdegga ah. Haddii aad leedahay waayo-aragnimo yar, waxaa fiican inaad barato xogta si faahfaahsan oo aad kala tashatid beerta caanka ah.
Marka la xirayo qajaarka, ha iloobin xididdadooda daciifka ah, haddii kale waxaad si fudud u soo jiidi kartaa warshad qarsoon.
Abaabulida qashin qajaar ah, ha iloobin dabeecadda nidaamsan ee dhammaan tallaabooyinka iyo ku saabsan duubista afuufaha ee saldhigga taageerada.
Ha iloobin inaad si nidaamsan u soociso jilicsanaanta iyo qajaarka waxyeelada leh, iyo sidoo kale inflorescences lab ah.
Waxaa muhiim ah in la xusuusto in daboolka qajaar laftiisu ay tahay mid khafiif ah oo jilicsan, oo aan waxyeello u geysanaynin sharafteeda.
Waa lagama maarmaan in si joogta ah loo yareeyo caleemaha qallalan iyo waxyeello antennae ka soo geedka.
Iska yaree oo nadiifi warshadda kaliya waxay ku samaysaa qalab fiican.
Inta lagu jiro beergooyska, ha ku beddelin dushooda duurka, maadaama dhirta laga yaabo inay huruud noqoto oo xitaa u dhintaan.
Looma baahna inaad ka tagto kareemka on stem ka soo caleemo gooyaa. Tani waxay horseed u noqon kartaa qaabka kiishashka budada ah, taas oo saameyn xun ku leh sameynta ugxan iyo horumarinta qajaarka.
Kobcinta iyo qajaarka qanjirada qafiifka ah ayaa ah mid xooggan, laakiin habka wax ku oolka ah. Beeraley kastaa wuu ogyahay faa'iidada ay leedahay in la jiido. Ka dib oo dhan, natiijo ahaan, waxaad heli doontaa goosashada cajiib leh leh dhadhan fiican, midho macaan.
Kala-bixinta beerta guriga dhexdiisa: kakanaanta iyo qarsoodiga ah ee goynta
Tilmaam talaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay taranta xabagta boqollaalnimada ee guriga. Talooyinka Daryeelka Ubax
Ubax Dieffenbachia: faa'iidooyinka iyo waxyeellada caafimaadka dadka
Noocyada doorashada iyo cuntooyinka ugu wanaagsan, sida loo kariyo hadhuudhka digaagga ee digsiga waa mid dhadhan fiican leh. Ka hor iyo ka dib sawirro
Qaadashada digaagga ayaa ku dhalatay Loman Brown oo leh awood sare
Geedka dhirta tufaaxa
Maanta, orchid ma aha sida warshad dhif ah beerta beerta qolka. Hase yeeshee, waxay ku xiran tahay cuduro kala duwan waxayna u baahan tahay daryeel gaar ah. Nasiib darro, way adag tahay in la helo macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan dayactirka ubax, cudurada orchid iyo daaweyntooda. Sidaa daraadeed, waxaan isku deyeynay inaanu daboolno dhibaatooyinka guud iyo dhibaatooyinka soo koraya ee orchids. Read More
Xusuusin-nadiifinta - cuntooyinka lagu kariyo kariska iyo digaaga, faa'iidooyinka iyo waxyeelada maaddooyinkaas
Digaagdaha ugu weyn aduunka ee leh hilib wanaagsan - jilicsan Jersey
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Beer cagaaran 2020